Wararka - Fur Suuqa Ruushka Bariga Fog
Bishii Ogosto 2020, dufcaddii ugu horreysay ee biirka Quruxda Madoow ayaa si guul leh loogu geeyay suuqa Ruushka ee Bariga Fog. Maaddaama ay tahay nooca caanka ah ee biirka shirkadda brewery ee JINBOSHI, tani waa markii ugu horreysay ee biirka Quruxda Madoow ay galaan suuqa Ruushka.
Sanadihii ugu dambeeyay, baahida loo qabo biirka tayada sare leh ayaa ku soo badanaya Ruushka. Dhanka kale, Shiinuhu wuxuu muddo dheer dhiirrigeliyay is-weydaarsiga dhaqaale ee Bariga Fog ee Ruushka.
"Saaxiib ka yimid Shiinaha ayaa igu riixay inaan bilaabo fekerka ku saabsan soo dhoofinta biirka ee Ruushka", ayuu yiri Victor Loginov, oo ah soo dejiye biirka Quruxda Madow. "Dad badan oo halkan jooga ayaa ka cawday in aysan ka heli karin biir tayo sare leh gudaha dalka, waxayna aad u xiiseyneysay in ay ka bartaan farsamooyinka wax soo saarka dalal kale".
Ugu dambeyntiina, Victor wuxuu la xiriiray JINBOSHI wuxuuna helay casuumaad uu ku soo booqdo khamriga. Bishii Noofambar ee la soo dhaafay, ka dib booqashadii JINBOSHI oo aan isku dayay biirkeenna, Victor wuxuu ku qancay howsha baallasheena iyo tikniyoolajiyadda.
In kasta oo iibka biirku aanu fiicnayn coronavirus darteed, haddana biirka farsamada ee tayo sare leh ayaa weli suuqiisa heli kara.
Markii aan khadka taleefanka kula xiriirno Victor, wuxuu ku faraxsan yahay inuu ka hadlo soo-saarka, iyo inuu ku faraxsan yahay inuu ka hadlo mustaqbalka biirka Ruushka. Wadahadalkeennu, dhanka kale, wuxuu aabbaha dib ugu soo celiyaa in ka badan - dib 12 bilood illaa markii ugu horreysay ee uu Victor kula sheekaysto khadka tooska ah. "Haddii aan soo dhoofsan karno badeecadaha kale ee lagu sameeyo Shiinaha, maxaan sidoo kale u soo dhoofsan karnaa Shiinaha biirka?" Fikradda Victor ee ah inuu isku dayo soo dejinta biirka Shiinaha ugu dambeyntii wuxuu ka dhigayaa mid run ah sanadka 2020.
“Markaan runta ka hadlo, waxaan isku dayay ku dhowaad khamri kasta markii aan booqanayay Shiinaha”, Victor ayaa yidhi, “markaa ugu dambayntii waxaan ku dhammaaday quruxda madow. Waa arrin aan aad ugu riyaaqay maxaa yeelay waxaan ka helay Shiinaha saaxiib wanaagsan.
Sababta kale ee uu ugu dhagan yahay Quruxda Madow: dhammaan buunbuuninta iyo khamiirka aan qaadanay waxaa laga keenay Yurub ama Ameerika. Taasi waa qayb muhiim ah oo ka mid ah soosaarida biirka wanaagsan, ayuu qabaa. “Taasi waa mid ka mid ilaha aan ugu jeclahay ganacsigayga beerta. Waa wax aan aad ugu riyaaqay ”, Victor ayaa ku celceliyay.
Aluminium Can 355ml Heerka, Khafiifa 310ml Aluminium Can, Aluminium Can 310ml Sleek, Aluminium Can 250ml Jilicsan, Aluminium Can 330ml Heerka, Khafiifa 200ml Aluminium Can,